आफ्नाे लागी राम्राे बानीकाे सुरूवात कसरी गर्ने ? जान्रुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
हरेक मानिस जिवनमा केही बनु या केही प्राप्त गरू भन्रे चाहन्छ । मानिस जन्मिसकेपछी उ हुर्किने वातावरण, उसमा विकास हुने साेचले उस्काे बानीहरूकाे विकास हुँदै जान्छ । ति बानीहरूले नै उसलाइ जिवनकाे यात्रामा डाेहेर्याइरहेका हुन्छन् । त्यसैले आफुलाइ बाटाे देखाउने ति बानीकाे छनाेट गलत भयाे भने व्याक्ति ठुलाे खाडलमा पर्न सक्छ ।
आफ्नाे लागी राम्राे बानीकाे सुरूवात कसरी गर्ने ?
एउटा डायरीमा आफ्नाे बानीहरू लेख्नुहाेस् । अब ति बानीहरूलाइ खराब बानी र राम्राे बानी राम्राे बानी गरि दुइ भागमा छुट्याउनुहाेस्। डायरीकाे अर्काे पानामा आफ्नाे लक्ष्य र याेजनाहरू लेख्नुहाेस् । अब अघिका ति बानीहरू आफ्नाे लक्ष्य तथा याेजनालाइ जाेडेर हेर्नुहाेस् ।
तपाइका बानीहरूले तपाइकाे लक्ष्य तथा याेजनामा कत्तिकाे सहयाेग गरिरहेका छन् या कत्तिकाे असर गरिरहेका छन् ? तपाइ आफ्नाे लक्ष्य तथा याेजना अनुसार अगाडी बढ्नका लागी कुन-कुन बानीमा सुधार गर्नुपर्ने रहेछ ? राम्राेसँग विश्लेषण गर्नुहाेस् । अब तपाइले आफ्नाे बानीमा सुधार ल्याउनुपर्ने कुरा के-के देख्नुभयाे ? टिपाेट गर्नुहाेस् ।
अघिका राम्रा बानी र नराम्रा बानी तथा सुधार गर्नुपर्ने कुरालाइ अब डायरीकाे एउटा पेजमा मिलाएर लेख्नुहाेस् । बानी परिवर्तन गर्न गाह्राे हुन्छ । तपाइले सबै बानी एकै पटक परिवर्तन गर्छु अथभा सबै बानी एकाै पटक परिवर्तन गर्छु भनेर सक्नुहुन्न । त्यसैले सुधार गर्नुपर्ने एउटा बानी छनाेट गर्नुहाेस्, जुन बानीले तपाइकाे लक्ष्य तथा याेजनामा सबैभन्दा बढी असर गरिरहेकाे छ ।
यसरी सुधार गर्नुपर्ने सबै बानीलाइ छनाेट गर्दै क्रमैसँग अँक दिदै जानुहाेस् । तपाइले एक नम्बरकाे सुधार गर्नुपर्ने बानीलाइ आज देखी नै प्रयास गर्नुपर्ने छ । जस्तै, तपाइ ढिलाे उठ्नु हुन्छ र याे बानी तपाइले सबैभन्दा पहिले सुधार गर्नुपर्ने छ भने, आज भाेलीकाे लागी सपय तालिका बनाउनुहाेस्, बिहान छिट्टै उठ्ने प्रतिबद्दता गर्नुहाेस् ।
जब तपाइ एक हप्तासम्म लगातार उठ्नुहुन्छ, तपाइमा त्याे बानीकाे रूपमा विकास हुन थाल्छ । एउटा बानी सुधार हुने महसुस भएपछी अर्काे बानी सुधार गर्न तर्फ लाग्रुहाेस् । बानी सुधारकाे लागी तपाइले आफ्नाे जिवनकाे लक्ष्य तथा याेजनालाइ दिमागमा कायम राखी राख्र जरूरी हुन्छ ।
जब तपाइले आफ्नाे लक्ष्य तथा याेजनालाइ सम्झिनुहुन्छ, तब तपाइ मेहनत गर्ने, लगनशिल बन्रे र अनुशासनमा रहने उत्पेरणा बढ्छ । त्यसैले बिहान उठिसकेपछी र राती सुत्नु भन्दा अगाडी आफ्ना लक्ष्य तथा याेजनाहरू लेखेकाे डायरी पल्टाउनुहाेस् । समय समयमा तपाइ हिजाे कहाँ हुनुहुन्थ्याे र आज कहाँ हुनुहुन्छ भन्रे मुल्याँकन गर्नुहाेस् । आफैले आफ्नाे प्रगति विवरण जाँच गर्नुहाेस् । यसले गर्दा तपाइलाइ अनुशासनमा रहन र राम्रा बानीहरूकाे विकास गर्न उत्प्रेरणा बढ्छ ।
जान्नुहाेस्, कसरी बसाल्ने पढ्ने बानी?
पठनमा रमाउन त्यस्तो विधि पढन्ते भइरहनु पर्दैन । तपाईं पठनमा रमाउन सक्नुभयो भने यसले कुनै विषयमा जानकार मात्र बनाउँदैन, गर्न आँटेका काममा पनि सहयोग पुर्याउँछ । पठनले हाम्रो सोचाइ र चिन्तनलाई फराकिलो बनाउँछ । साथीभाइको जमघटमा होस् या प्रोफेसनल कुराकानी गर्दा नै किन नहोस्, पठनमा रुचि हुनेहरुमा कुरा गर्ने मेसो पनि हुन्छ ।
तर हिजोआज अधिकांशको एउटै गुनासो हुन्छ, पढ्न त मन छ तर के गर्नु रु फुर्सदै हुन्न । साँच्चिकै हामीलाई पढ्न मन छ भने र केही कुरामा ध्यान दिन सक्यौँ भने पढ्नको लागि समय छैन भनिराख्नु पर्दैन ।
२.आफ्नो उद्देश्य आफैँले बनाउने
किन यस्तो हुन्छ त रु अनुसन्धानअनुसार आफू कसरी पढ्ने भन्ने योजना अरुलाई सुनाउँदा अर्को व्यक्तिले तिमीले भनेजसरी हैन, मैले भनेजसरी पढ भनेर योजना सुनाइँदिदा र त्यो योजना अँगाल्दा आफ्नो योजनाले विफल भएको देखिएको छ । त्यसकारण केही नितान्त व्यक्तिगत योजना नसुनाएकै राम्रो ।
३.अत्यास लाग्दा नआत्तिनुस्
अधिकांश पाठकलाई जतिसुकै मज्जाको पुस्तक भए पनि बीचमा पुगेपछि पढ्न अल्छी लाग्छ । मैले यो किन यो पढिरहेको छु भनेर अत्यास लाग्छ तर पिर नमान्नुस् । जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ । पढिरहेको पुस्तकबाट केही ज्ञान प्राप्त गरेजस्तो लाग्दैन वाहियात लाग्छ भने त्यो छाडिदिनुस् र अर्को सुरु गर्नुस् ।
‘द ह्यापिनेस प्रोजेक्ट’का लेखक रविनले भनेका छन्– जित्ने मान्छे कहिल्यै भाग्दैन । ऊ अघि बढ्छ । पढ्दापढ्दै अल्छी लाग्यो भने तपाईं झन् धेरै पुस्तक पढ्नुस् राम्रा राम्रा । अल्छी लाग्यो भनेर बीचैमा छाड्ने हो भने कहिल्यै पढिदैन ।
४.जे मन पर्छ त्यही पढ्ने
६.पढ्नको लागि समय छुट्ट्याउनुस्
सबैभन्दा ठूलो कुरा पढ्नका लागि समय छुट्ट्याउनु हो । जब हामीले समय नै छुट्ट्याएर, यो महत्वको काम हो र यसलाई म यति समयमा पढ्छु भनेर प्रतिबद्ध भयौँ भने केही दिनभित्रमा नै हामी त्यो समय तालिकामा अभ्यस्त हुन्छौँ । हामी अधिकांश समय सामाजिक सँजाल र युट्युबमा बिताइरहेका हुन्छाैँ । सामाजिक सञ्जाल र युट्युब चलाउने समय घटाइदिने हो भने पढ्नका लागि समय निकाल्न सकिन्छ ।
७.पढ्ने कुरालाई चुनौतीका रुपमा लिनुहोस्
निरन्तर ३/४ घण्टा लगातार पढ्नु कम्ती त चुनौतीको कुरा हैन १ पढाइलाई हलुका रुपमा नलिई चुनौतीको रुपमा लिनु पर्छ । त्यसरी लिँदा समयको व्यवस्थापन मिल्छ । सँगै अरुले के पढिरहेका छन् भनेर चिया गफ पनि गर्न सकिन्छ ।
८.पढ्ने वातावरण आफैँ सिर्जना गर्ने
९.पुस्तक आफैँ किन्ने
१०.प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने
पढ्ने कुरालाइ विशेष केही नठान्नुस् । पढ्नु पनि प्राकृतिक कुरा हो, जसरी हामी खान्छौँ श्वास फेर्छाैँ, सोच्छौँ, त्यस्तै पढ्नु पनि एउटा काम हो भन्ने सोच्नुस् । यसरी सोच्दा पढ्नै पर्ने छ भनेर चिन्ता लिइरहनु पर्दैन ।
१२.पढ्ने कुरा धेरै छन्
अखबार, म्यागेजिन र अनलाइन सामग्रीहरु प्रशस्तै पाइन्छन् । फुर्सद भयो कि पढ्न तयार भइहाल्नुस् । जस कारण तपाईंको पढ्ने गति बढ्न थाल्छ ।
१३.धेरै थरिका पुस्तक पढ्ने
पुस्तकहरुको विविधता यति धेरै छ कि हामीले के गर्दा के पढ्ने भनेर छुट्ट्याउन सक्छौँ । घुम्दा पढ्ने, घरमा गहिरो अध्ययन गर्ने, रेस्टुराँमा पढ्ने विषयहरु कि त किताब कि त इबुक छुट्याउनु पर्छ । यसरी ठाउँअनुसार, मुडअनुसार र इबुक वा किताबलाई छुट्याउन थाल्नु भएपछि तपाईंको पढ्ने जाँगर पनि बढ्दै जान्छ । जति पढ्दै गयो, उति धेरै नयाँ कुरा थाहा हुँदै जान्छ । यसै समय खेर फाल्नु भन्दा पढ्नुका फाइदा बुझ्दै जानुहुन्छ ।
Up Next हामीले कुनै पनि निर्णय लिँदा ध्यान दिनुपर्ने महत्वपुर्ण कुराहरू यस्ता छन्, जान्रुहाेस्